भेरी अञ्चल अस्पतालमा छुट्टै सर्पदंश उपचार कक्ष सुरु, दिनहुँ उपचारको लागि ५–६ जना आउन थाले – Rajdhani Daily
भेरी अञ्चल अस्पतालमा छुट्टै सर्पदंश उपचार कक्ष सुरु, दिनहुँ उपचारको लागि ५–६ जना आउन थाले
सर्पदंशका विरामीको चाप बढ्न थालेपछि नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा छुट्टै सर्पदंश उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याई उपचार सुरु गरिएको छ । भेरी अञ्चल अस्पतालमा दैनिक जसो सरदर ५–६ जना सर्पदंशका विरामी आएपछि उनीहरुको उपचारको लागि छुट्टै वार्डको महशुस गरी सर्पदंश उपचार कक्ष सुरु गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उनले गर्मीयाममा बढी मात्रामा सर्पदंशका घटनाहरु बढ्ने भएको र अस्पतालमा प्रदेश नं. ५, ६ र ७ का अन्य जिल्लाहरुबाट समेत उपचारको लागि रेफर भएर आउने विरामीको चाप अत्याधिक हुन थालेपछि छुट्टै उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।
‘हामीले सर्पदंशको विरामीको लागि छुट्टै उपचार कक्ष त सञ्चालनमा ल्यायौ । उपचारको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र अति सघन कक्ष संगै ईक्युपमेन्टको आश्यकता छ । अहिले जसोतसो काम चलाएका छौ तर, राज्यले अत्यन्त संवेदनशिल भएर यसको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ’–उनले भने ।
भेरी अञ्चल अस्पतालमा गर्मी बढ्दै जाँदा सर्पदंशका विरामी दिनहुँ ५–६ जना आउने गरेको सर्पदंशका विरामीको उपचारमा संलग्न डा. कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । उनले विषालु सर्पले टोकेर उपचारको लागि आउने विरामीलाई आईसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई लक्षित गरी अस्पतालमा आईसियु कक्षमा बेड संख्या बढाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
‘विषलु सर्पले टोकेका विरामीलाई आईसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी कहा भएको आईसियुमा ६ वटामात्र बेड छ । आजै (बुधबार) मात्र ५ जना विषलु सर्पले टोकेका विरामी उपचारको लागि आइपुगेका छन् । ३ जनालाई आईसियुमा र २ जनालाई वार्डमा राखेर उपचार गरि रहेका छौ’–उनले भने ।
मंगलबार भेरी अञ्चल अस्पतालमा कञ्चनपुरबाट ४० वर्षिय किरण महरा, बाँके खजुराका ७० वर्षिय वहाव खाँन, बैजनाथ गाउपालिका गाभरकी ८ वर्षिया देविका शाही, धनगढीबाट रिफर भएर आएकी भगिरथी देवि भट्ट र बर्दियाका कर्णबहादुर विसी विषलु सर्पले टोकेर उपचारको लागि भर्ना हुन आएका हुन । उनीहरु मध्ये तीन जनाको आईसीयु र २ जनाको वार्डमा राखेर उपचार भई रहेको डा. आचार्यले जानकारी दिए ।
उनले सर्पदंशका विरामीको उपचारको लागि छुट्टै वार्ड र आईसियुको व्यवस्थासंगै राज्यले जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा लिदै उपचारको लागि आवश्यक थप जनशक्ति समेतको व्यवस्था गर्न माग गरे । गत वैशाखदेखि हालसम्म विषालु सर्पले टोकेर उपचारको लागि अस्पताल ल्याउदै गर्दा ९ जना र अस्पतालमा उपचारको क्रममा १ जनाको गरी १० जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । बैशाखदेखि हालसम्म भेरी अञ्चल अस्पतालमा १ सय १० जनाले उपचार गराएका छन् ।